Vaovao - Nahazo ny iF DESIGN AWARD 2021 i Arenti
Hoofddorp, 13 aprily 2021 - Mpandresy tamin'ny iF DESIGN AWARD i Arenti, loka famolavolana malaza eran-tany. Ilay vokatra nandresy, Arenti Optics Smart Home Security Series, dia nandresy tamin'ny fifehezana ny vokatra, tamin'ny sokajy fakan-tsary sy lakolosy fiambenana. Isan-taona, ny fikambanana famolavolana mahaleo tena antitra indrindra eto an-tany, iF International Forum Design GmbH, monina any Hannover, dia mandrindra ny ANARANA DESIGN AW.
Nahazo ny jury 98-mpikambana ny Arenti Optics Smart Home Security Series, nahitana manam-pahaizana tsy miankina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, miaraka amin'ny endriny Aluminium Framed, 2K Ultra HD Resolution ary ny artificielle artifisialy Powered. Raikitra ny fifaninanana: firaketana efa ho 10.000 no natolotra avy amin'ny firenena 52 amin'ny fanantenana hahazo ny tombo-kasen'ny kalitao.
Ny fampahalalana misimisy kokoa momba ny Arenti Optics Smart Home Security Series dia hita ao amin'ny fizarana "Mpandresy" ao amin'ny IFITO REHETRA REHETRA TONTOLO IZAO.
Arenti dia marika DIY Smart Home Security System avy amin'i Arenti Technology, mikendry ny hanolotra ny mpampiasa manerantany mora kokoa, azo antoka sy marani-tsaina fiarovana entana an-trano & vahaolana miaraka amin'ny fitambarana tonga lafatra ny fanapahana, ny vidiny mirary, ny haitao mandroso ary ny asa ataon'ny mpampiasa.
Ny vokatra an-trano arenti smart dia manome ny zava-bita tsara indrindra, ny faharetany, ny fahaizany miovaova ary ny sandany. Ny vokatra rehetra dia 100% novolavolain'ny ekipa R&D misy injeniera 100+ indrindra avy amin'ireo vondrona fiarovana 3 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, noforonin'ny tarika mpamolavola italianina izay manao endrika ho an'ny Braun, Panasonic, ary novokarin'ny ivon-toeram-pamokarana misy mpiasa maherin'ny 500 na amin'ny Netherlands ary ny PRC.
Miaraka amin'ny biraon'i Eropa naorina ao Amsterdam & birao amerikana natsangana tany California, i Arenti dia nivadika ho iray amin'ireo mpamatsy fakan-tsary an-trano 10 hendry eran-tany miaraka amina fakantsary 3 tapitrisa pcs amidy tamin'ny taona 2019, sombiny 4,5 tapitrisa namidy tamin'ny taona 2020. Ny fakan-tsarimihetsika an-trano dia misy fakan-tsarimihetsika anatiny sy ambaratonga avo lenta, fakantsary video & fakantsary jiro, ary ny vokatra dia mifanaraka amin'ny Alexa, Google Assistant ary sehatra hafa.
Momba ny ANARANA DESIGN iF
Nandritra ny 67 taona, ny iF DESIGN AWARD dia nekena ho mpanaraka kalitao ho an'ny famolavolana miavaka. Ny marika iF dia malaza manerantany noho ny serivisy famolavolana miavaka, ary ny iF DESIGN AWARD dia iray amin'ireo loka famolavolana manan-danja indrindra manerantany. Ny fandefasana dia omena amin'ireto taranja manaraka ireto: Product, Packaging, Design and Service, Architecture and Interior Architecture ary koa Professional Concept User Experience (UX) ary User Interface (UI). Ny fidirana nomena rehetra dia asongadina ao amin'nyIFITO REHETRA REHETRA TONTOLO IZAO ary ao amin'ny App famolavolana iF.
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa azafady:
Fotoana fandefasana: 13/04/21